अन्तर्वार्ता Archives » Page9of 15 » Etajakhabar
हट एण्ड सेक्सी नायिकाको भुमीकामा खुल्न चाहान्छु :- नायिका खुश्बु खड्का (भिडियो)
ताजा खबर काठमाडौँ । सुन्दरी खुश्बु खड्का बहुमुखी प्रतिभाकी धनी छिन् । यि सुन्दरीले जीवन्त अभिनयका साथसाथै खेलाडीको पनि परिचय स्थापीत गरेकी छिन् । तेक्वान्दोकी ब्ल्याक बेल्टधारी उनी कुशल ब्यबसायी पनि हुन् । ब्यबसायको अलावा उनी एक मोडलका रुपमा पनि परिचित छिन् । यतिका धेरै परिचयका अगाडी अनी आँफुलाई स्थापीत नायिकाका रुपमा उभ्याउन भनेर रातदिन नभनी आफ्नो काममा लागीपरिरहेकी छिन् । चलचित्र उद्योगमा ...
आधा घण्टाको कार्यक्रममा गीत गाउँदै यसरी लठ्याइन् गायिका अमृता लुगेंली मगरले (भिडियो)
काठमाडौँ । गायिका अमृता लुगेंली मगर देख्दा जति सिरियस देखिन्छिन् भेट्दा उनी धेरै फ्रयांक छिन् । पाको पना र बिन्दास गीत सलल बगेर गाउन सक्नु उनको विशेष कला हो । गायनमा विशेष रुची राखेर काठमाडौँ आएकी काभ्रेली यि सुन्दरी गायिकाले सुरुवाती कालमा दोहोरी साँझबाट आफ्नो गायन यात्रा सुरु गरे पनि पछिल्लो समय उनको भिन्न गायन छवीका कारण चर्चा सांगीतिक दुनियामा चुलीएको छ । हे मलाई नि माया प्रेम जोड्न म...
ह्याण्डसम केटाहरुले मलाई डार्लीङ् भनेर बोलाउँदा मज्जा आउँछ :- गायिका कमला सापकोटा
ताजा खबर काठमाडौँ । कमला सापकोटा आँफुलाई गायिका भन्न रुचाउँछिन् तर नृत्यमा पनि उनको विशेष रुची छ । गायिकाका अलावा उनी बेली डान्सरका रुपमा पनि परिचित छिन् । बाल्यकालदेखि नै नृत्य र गायनमा संभावना खोज्दै आएकी उनले सन् २००८ मा आफ्नो पहिलो एब्लम सार्वजनिक गरेकी हुन् । यसबिचमा उनले मौसम, ड्रिम बेली र डार्लीगं गरी ३ वटा एल्बम प्रकाशनमा ल्याएकी छिन् । उनको डार्लीङ् एल्बम हालसालै सार्वजनिक भएको हो ।...
आई. लभ. यू. भन्ने म्यासेज पनि आउँछन् :-गायिका प्राश्ना पाण्डे (भिडियो)
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सुन्दरी गायिकाहरुको आगमन एकपछि अर्को गर्दै हुने क्रम ह्वात्तै बढेका बेला यही सुचीमा गायिका प्राश्ना पाण्डे पनि पर्छिन् । गाजलु मेरा आँखा देखेर भुतुक्कै, छुकछुक गुड्न थाल्यो मनहरुको रेल यहाँ, लगायतका गीतहरुकी गायिका पछिल्लो समय सांगीतिक क्षेत्रमा ब्यस्त हुँदै जान थालेकी छिन् । सामाजिक संजालमा कमै मात्रामा समय बिताउने बताउनी यि सुन्दरी गायिकालाई...